» को पुग्छ फाईनलमा ?
को पुग्छ फाईनलमा ?
२८ चैत्र २०७६, शुक्रबार ११:५८
मकवानपुर, २८ चैत । चर्चित सिंगिङ रियालिटी शो ‘नेपाल आईडल सिजन ३’ को नयाँ एपिसोड प्रसारण अहिले बन्द छ । देश लकडाउनमा गएसँगै यसका नयाँ एपिसोडहरु छायाँकन हुन र प्रसारण हुनसकेका छैनन् । यद्यपि लकडाउन अघि भएको वाईल्ड कार्ड राउण्ड र त्यसअघि छानिएका ४ प्रतियोगीहरुको पखाईको घडि झन्–झन लम्बिँदै गएको छ । आउँदो बैशाख ३ गतेसम्म कुनैपनि हालतमा नेपाल आईडलको नयाँ एपिसोडको छायाँकन हुनेछैन जसका कारण नेपाल आईडलको फाईनलमा को पुग्छ भन्ने कुनै निक्र्यौल चाँडै थाहा पाउन नसकिने भएको छ । यद्यपि हामी यस भिडियो सामग्रीमा उत्कृष्ट ४ मा पुगेका ४ प्रतियोगीहरुको फाईनलमा पुग्ने सम्भावनाका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ । यी ४ प्रतियोगीहरुमध्ये दुई प्रतियोगीले २–२ पटक बटम लाईनको सामना गरेका छन् भने दुई जनाले एकपटक पनि बटम लाईनको सामना गरेका छैनन् । अवार्डका आधारमा सज्जा चौलागाई पहिलो नम्बरमा, प्रविण बेड्वाल दोस्रो नम्बरमा र केभिन ग्लान तामाङ र नेशन पुन मगर समान स्थानमा छन् । भोटिङका आधारमा प्रविण र सज्जा खतरामा छन् भने केभिन र नेशन सुरक्षित छन् । तपाईको विचारमा सज्जा चौलागाई, प्रविण बेड्वाल, केभिन ग्लान तामाङ र नेशन पुन मगरमध्ये कुन कुन प्रतियोगीहरु फाईनलमा पुग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् ।
चर्चा सुरु गरौँ सज्जा चौलागाईबाट । नेपाल आईडलको स्टेजमा तहल्का मच्चाउँदै गरेकी सज्जाको आजसम्मका प्रस्तुतिहरु फितलो देखिएका छैनन् । स्टेजमा उक्लने बित्तिकै रकिङ प्रस्तुति दिने उनी उत्कृष्ट ४ मा पुगेका अन्य ३ जना प्रतियोगीका लागि पनि भारी बन्दै आएकी छिन् । सज्जालाई धेरैले पहिलो महिला नेपाल आईडलका रुपमा समेत अपेक्षा गरेका छन् । सज्जा अवार्डका मामला पनि अरुभन्दा दुई कदम अगाडि छिन् । उत्कृष्ट ४ सम्म आईपुग्दा उनले अवार्डको नयाँ रेकर्ड नै बनाएकी छिन् । उनले ११ वटा अवार्ड जित्दै शिर्षस्थानमा छिन् । सज्जाले ४ वटा रेस्पेक्ट पफोर्मेन्स अफ द विक अवार्ड, २ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द डे अवार्ड र ५ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड जितेकी छिन् । सज्जाले अहिलेसम्म दुई पटक बटम ३ को सामना गरेकी छिन् ।
नेपाल आईडल सिजन ३ को अर्का बलिया प्रतिस्पर्धी हुन् प्रविण बेड्वाल । उनलाई निर्णायकहरुले संगीतको उस्तादको संज्ञा समेत दिएका छन् । बर्दियाका प्रविण नेपाल आईडल सिजन ३ मा ऐतिहासिक प्रस्तुति दिने प्रतियोगी हुन् । प्रविणले नेपाल आईडलको स्टेजमा अहिलेसम्म ८ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ६ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड प्राप्त गरेका छन् भने २ वटा रेस्पेक्ट पफोर्मेन्स अफ द विक अवार्ड प्राप्त गरेका छन् । प्रविणले गाला राउण्डको उत्कृष्ट ७ को प्रस्तुतिपश्चात खुलेको भोटिङमा सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका थिए । प्रविणले अहिलेसम्म २ पटक बटम ३ को सामना गरेका छन् ।
केविन ग्लान तामाङ आजभोलि धेरैको रोजाई बनेका छन् । हुन त केविनलाई नेपाल आईडलको स्टेजमा आउनुपूर्व नै चितवन र त्यस आसपासमा धेरैले चिन्थे । तर उनी अहिले संगीतको नयाँ उचाई हासिल गर्दैछन् । नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारमध्येका एक प्रतियोगी हुन् केविन ग्लान तामाङ । केविनले नेपाल आईडल सिजन ३ को उत्कृष्ट ४ सम्म पुग्दा ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले ४ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड, २ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड र १ वटा रेस्पेक्ट पफोर्मेन्स अफ द विक अवार्ड जितेका छन् । केविनले उत्कृष्ट ८ को प्रस्तुति र उत्कृष्ट ५ को प्रस्तुति पश्चात खुलेको भोटिङमा गरी दुई पटक सर्वाधिक भोट समेत प्राप्त गरेका थिए । उनी उत्कृष्ट ४ मा आईपुग्दासम्म एक पटक पनि बटम लाईनमा परेका छैनन् ।
कभर गीतहरु र ब्याण्डमाबाट चर्चामा आएका नेशन पुन मगर अहिले थप चर्चित छन् । प्रशंसकहरुमाझ उनी नेपाल आईडल सिजन ३ को उपाधी दाबेदारका रुपमा उभिएका छन् । उनले स्टेजमा हिमालीभेगदेखि तराईभेगसम्मलाई गीतमार्फत सम्बोधन गरिसकेका छन् । नेशनले अहिलेसम्म ७ वटा अवार्ड जितेका छन् । उनले २ वटा ग्लामर मोमेन्ट अफ द विक अवार्ड, ४ वटा अपलिफ्टीङ पफोर्मेन्स अफ द डे अवार्ड र एउटा रेस्पेक्ट पर्फोमेन्स अफ द डे अवार्ड पनि जितेका छन् । उनले दुई पटक सर्वाधिक भोट पनि प्राप्त गरिसकेका छन् । उनी पनि अहिलेसम्म बटम लाईनमा परेका छैनन् ।
तेस्रो पटक जितेर सिधै उत्कृष्ट ८ मा भरतमणि पौडेल
कमेडी च्याम्पियन सिजन २ का उत्कृष्ट ९ प्रतियोगीहरु
नकआउटमा उक्लिए जेनिश राई
सोनाम ग्याल्सो शेर्पा नकआउटमा
भोईस अफ नेपालमा मेलिना मैनालीलाई फेरि सफलता
सिमराकी श्रेया नेपाल नकआउटमा भिड्दै